1 KORINTIANINA 14.1-9 F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
1 KORINTIANINA 14.1-9 F. 6
NY ZAVATRA REHETRA NATAO HO FAMPANDROSOANA
Ny faminaniana (1-6). Zava-dehibe ny fitiavana, isan’ny fanehoana izany ny mikatsaka izay mahasoa ny hafa (1). Izany indrindra no hanamarihan’i Paoly ny mahazava-dehibe ny faminaniana mihoatra ny miteny amin’ny teny tsy fantatra (2). Ny faminaniana mahasoa kokoa noho izy mitondra fampandrosoana, famporisihana ary fampiononana (3) satria ny fanomezam-pahasoavana dia tsy natao ho an’ny tena fa ho an’ny fiangonana ilay tenan’i Kirsty (Efesiana 4.11-12)
Ny teny faminaniana dia mipaka mivantana amin’ny fanahy. Tsy resaka ny amin’ny ho avy ihany fa mitondra fampaherezana amin’ny fotoana iray hilana izany indrindra.
Ny faminaniana dia tsy voatery mitondra fampianarana na fahalalana vaovao saingy miteny amin’ny feon’ny fieritreretana sy fanahy ka mahakasika sy mitsara.
Misy fotoana isika mandre teny toa mahazatra fa saingy amin’ny fotoana iray dia tena mandona ny ati-fanahy manokana izay voambara. Io ilay ohatr’ilay « voatsindrona tao am-po » ( Asan’ny apostoly 2.37). Ny mpianatra ny Tompo dia nahatsapa izany raha nampionona azy teny andalana ho any Emaosy Jesoa « tsy nangorokaroka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an dalana Izy ? »
Ny fiteny tsy fantatra (6-9). Tsy manamaivana na manambany ny fitenenana amin’ny teny tsy fantatra i Paoly fa misarika ny saina kosa amin’ny fiantraikan’izany amin’izay mihaino na ny fiangonana (6) raha tsy fantatra ny hafa tokoa izay dikan’ny zavatra henoina dia tsy hitondra inona izany (7-9), tsy hisy fiombonana ho amin’ny «Amen» izany. Hilana fandikana ny teny tsy fantatra raha atao eo amin’ny fiangonana.